ပြည့်စုံတဲ့ အသင်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ နေရာ နှစ်ခုကို အင်အား ဖြည့်တင်းရမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဗ် - SPORTS MYANMAR
ပြည့်စုံတဲ့ အသင်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ နေရာ နှစ်ခုကို အင်အား ဖြည့်တင်းရမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဗ်
By Edi Tor September 11, 2020
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဒီမစ်တာ ဘာဘာတော့ဗ် က အသင်းဟောင်း အနေ နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်လာ နိုင်ရေး အတွက် လက်ရှိ အသင်း မှ နေရာ နှစ်ခုကို နောက်ထပ် အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့သာ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် အသင်းကို ဘာဘာတော့ဗ် အင်အား ဖြည့်တင်း စေလိုတဲ့ နေရာတွေ ကတော့ ဗဟို ခံစစ် နေရာနဲ့ ညာခံစစ် နေရာ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေ တုန်းက အဆိုပါ နေရာတွေ အတွက် မက်ဂွားယား ၊ ဘစ်ဆာကာ တို့ကို ခေါ်ယူဖို့ ပေါင် 130 သန်း အထိ သုံးစွဲခဲ့ ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာကို အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့ အတွက် ဒေါ့မွန် အသင်း မှ ဂျေဒန် ဆန်ချိုကို ဦးစားပေး ပစ်မှတ် အဖြစ် ထားရှိ နေကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာဘာတော့ဗ် ကတော့ တိုက်စစ်ထက် ခံစစ်ပိုင်း ကိုပဲ အင်အား ဖြည့်တင်းသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေးအမြင် မှာတော့ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ကစားသမား နှစ်ဦးပဲ လိုအပ် နေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။ ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား တစ်ဦး နဲ့ ညာ ခံစစ် ကစားသမား တစ်ဦး ပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော့် အတွက် ဦးစားပေး ကတော့ ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား ခေါ်ယူရေး ပါပဲ ”
” အဲ့တာ ဆိုရင် အသင်းဟာ ပြည့်စုံ သွားပါ လိမ့်မယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင် သပ်သပ် ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ ကစား သမား တစ်ဦးပဲ ခေါ်မယ်ဆိုရင် တိုက်စစ်မှူး ခေါ်တာက ထူးခြား နေပါ လိမ့်မယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ ၊ ကစားသမား ခေါ်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တော့ ရတဲ့ ကစားသမားကို ခေါ်ယူလိုက်တာမျိုး မလုပ်သင့် ပါဘူး ”
” အချို့တွေ ကတော့ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ အတွေ့အကြုံ ရင့်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ၊ အသက်ငယ်ပြီး ရေရှည် ကစားပေး နိုင်မယ့် တိုက်စစ်မှူး လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ကြေး ပေးကြပါ လိမ့်မယ် ။ တကယ်တမ်း မှာတော့ ဒါလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ အရာ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွက် ဘယ်သူ့ကို ခေါ်မလဲ ? ”
” ခင်ဗျားတို့ ကစားသမားကို ခေါ်ယူ လိုက်မယ် ဆိုရင် သူ့ကို ပျော်အောင် ထားရပါ ဦးမယ် ။ အသင်းမှာ အဲ့ဒီ နေရာ အတွက် ကစား ပေးဖို့ အစ်ဂ်ဟာလို ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ အသင်းအတွက် လူစားဝင် ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ရတာတောင် အဆင်ပြေခဲ့ ပါတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီလို ကစားသမားမျိုး ခေါ်ချင်တာလား ? ” လို့ ဘာဘာတော့ဗ် က မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် အတွက် သီးသန့် ခေါ်စေချင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးမျိုး ရှိလားလို့ အမေး ခံလိုက် ရချိန် မှာတော့ ဘာဘာတော့ဗ် က ‘ yes, ကျွန်တော် ပါပဲ ‘ လို့ ဟာသ လုပ်ရင်း အဆိုပါ နေရာ အတွက် မာရှယ် ၊ ရပ်ရှ်ဖို့ တို့ ရှိနေတဲ့ အတွက် နိုးပါ လို့ ဆက်လက် ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေး ထဲမှာတော့ နိုးပါ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ မာရှယ် ၊ ရပ်ရှ်ဖို့ တို့ကို တကယ်ပဲ နှစ်သက်တယ်လေ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ မနှစ်က တွေ့ခဲ့တဲ့ ပုံစံ အရ ဆိုရင် မေဆွန် ဂရင်းဝုဒ် ကိုလည်း ပွဲကစားချိန်တွေ ဆက်လက် ရရှိ စေချင်ပါ သေးတယ် ။ သူဟာ ပွဲထွက်ခွင့် ရဖို့ ထိုက်တန်သူ ပါပဲ ”
” အကယ်လို့ သူတို့ တွေသာ ဒီလို ကစားသမား အစုအဖွဲ့ထဲ ဂျေဒန် ဆန်ချို ကို ထည့်သွင်း လိုက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ဟာ တစ်ကယ့်ကို ငယ်ရွယ်တဲ့ ၊ ရှေ့ဆက် ကောင်းသထက် ကောင်းမွန် လာမယ့် ကစားသမား တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရလိုက်မှာ အသေအချာ ပါပဲ ” လို့ ဘာဘာတော့ဗ် က သုံးသပ် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။